Izindaba - Ulwazi lwamafutha okudla
1. Yidla. Ingenye yezakhi ezintathu eziyinhloko (i-carbohydrate, amaprotheni namafutha) umzimba womuntu okungafanele ukuthi untule. Ukusetshenziswa kungenye yezimpawu zezinga lokuphila. Ukuhlinzeka ngama-acid anamafutha abalulekile, amavithamini ancibilika amafutha kanye nezimo zokumunca amavithamini ancibilikayo, amandla, nokwenza ngcono ukunambitheka.
2. Imboni. Upende, umuthi, uwoyela othambisayo, udizili we-bio, njll. Okususwayo kwawo kusetshenziswa emikhakheni eminingi yezimboni.
3. Okuphakelayo. Izilwane zidinga okuncane. Izitshalo azidingi nhlobo. Izitshalo zika-oyela nezinye izilwane ziyizitshalo zamakhemikhali ezenza uwoyela namafutha.
Ukwesaba okune: ukushisa, umoya-mpilo, ukukhanya (ikakhulukazi i-ultraviolet), ukungcola (ikakhulukazi ithusi, kulandele insimbi, yikho okubangela ukonakala kukawoyela).
Njengamanje, izingxenye zezilwane nezitshalo nezilwanyana ezincane ezinokuqukethwe kukawoyela okungaphezu kuka-10% kuvame ukusetshenziswa njengoyela owenza uwoyela, futhi izingxenye ezithwala uwoyela zezitshalo ngokuvamile ziyimbewu nomgogodla.
1, uwoyela Yemifino:
1) Amafutha we-Herbaceous: ubhontshisi, iphenathi, irapeseed, isesame, ikotini (izitshalo ezinhlanu ezinkulu zamafutha eChina), njll.
2) Amafutha anokhuni: inhlamvu yesundu, izithelo; kernel kakhukhunathi, izithelo; izithelo zomnqumo, inhlamvu, njll. Imbewu yeTung ihlukile eChina.
3) Ngemikhiqizo: i-rice bran, igciwane lommbila, igciwane likakolweni, imbewu yamagilebhisi, njll.
2. Inkomba yekhwalithi kawoyela wezitshalo
1) Ingqikithi kawoyela (ngaphandle kweDaza).
2) okuqukethwe umswakama.
3) Okuqukethwe kokungcola.
4) Okuqukethwe okusanhlamvu okungaphelele.
5) Izinga lesikhunta (inani lamafutha acid).
I-6) Izinga le-kernel elicwengekileyo lamafutha ashubile.
Inqubo yokukhiqiza uwoyela
1. Inqubo yesibili yokwenza uwoyela wokucindezela.
2. Ngaphambi kokucindezela inqubo yokungena.
3. Inqubo yokukhipha eqondile.
4. Inqubo eyodwa yokwenza uwoyela wokucindezela.
Izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene zinezinqubo ezahlukahlukene zokwenza uwoyela
Izinqubo eziphambili zokukhiqizwa kukawoyela zimi ngale ndlela elandelayo:
1. Ama-Soybean: kunenqubo yokukhipha yesikhathi esisodwa nenqubo yokucindezela ebandayo. Ngenxa yezidingo ezahlukahlukene zekhwalithi yesidlo sosoya, ukukhishwa kwesikhathi esisodwa kunokuxebuka, ukunwetshwa kanye nenqubo yokukhishwa kwamazinga aphansi okushisa.
2. I-rapeseed: inqubo yenqubo yokukhipha imishini yangaphambi kokucindezela, kukhona ukuxebuka, inqubo yokukhipha isandiso.
3. Iphenathi yamantongomane: ngenxa yezinqubo ezahlukahlukene zokwenza uwoyela, ingaveza uwoyela wamantongomane ovamile neLuzhou flavour oil peanut.
4. I-Cottonseed: inqubo yokukhipha umshini wangaphambi kokushicilela kanye nenqubo yokukhipha eyandisiwe, inqubo yokukhipha ine-solvent eyodwa i-leaching ejwayelekile kanye nenqubo ye-levent solvent leaching.
5. I-Sesame: ngenxa yenqubo ehlukile yokwenza uwoyela, kukhona uwoyela wesame ovamile, uwoyela owenziwe ngomshini nowoyela we-Xiaomo.
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Yonke Imikhiqizo I-Oil Expeller, Umshini Wokucindezela u-Cold Press, I-Olive Oil Press, Umshini Wokucindezela Uwoyela Omncane, Umhlwanyeli Wembewu Yembewu, Umshini Wokucindezela Uwoyela,